विगत एक दशक देखि चलचित्र निर्देशन यात्रामा लागेकी निर्देशक समुन्द्र भट्ट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा गर्विलो नाम हो । सानै उमेर देखि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहेर सिने नगरीमा स्थापित हुन सफल निर्देशक समुन्द्र भट्ट चलचित्र निर्देशक समाज नेपालको कोषाध्यक्ष हुन् । चलचित्र विषयमा पढेर निर्देशनमा प्रवेश गरेकी उनी सामाजिक कार्यमा समेत परिचित नाम हो। निडर स्वाभावकी भट्ट चाडैँ नै नयाँ चलचित्र निर्देशन गर्ने तयारीमा छिन। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियो पनि निर्देशन गर्न सुरु गरेकी उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाइ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन विभिन्न महत्वपुर्ण भूमिका निर्बाह गरिसकेकी छिन्। व्यवसायी समेत रहेकी कुशल चलचित्र निर्देशक समुन्द्र भट्टसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ।
नमस्कार ! आजकाल के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
नमस्कार, आजकल नयाँ चलचित्रको स्क्रिप्ट, गीत फाइनलको तयारीमा लागेकी छु। त्यसैगरी आफ्नै व्यापार व्यवसाय र सामाजिक कार्यमा व्यस्त छु।
सिनेमा एउटा समाजको ऐना हो, जसले समाजमा देशमा र विश्वमा भएका मानचित्रलाई दर्शकसामु प्रस्तुत गर्दछ। तर हामीले सधैं मनोरञ्जनको साधन मात्रै मान्यौ । चलचित्र एउटा बिश्वबिद्यालय पनि हो । नेपालमा सिनेमा लाई केवल हलमा चल्नुलाई सफलता मानिन्छ । तर त्यो होइन । देशमा परिवर्तन ल्याउने बाटो पनि हो चलचित्र अनि मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने माध्यम समेत हो । अहिले नेपालमा निर्माण भैरहेका नेपाली चलचित्रको मुलधार सस्तो मनोरञ्जन मात्रै हो । साढेँ दुई घन्टा दर्शकले सस्तो र भड्किला डायलग, हाउभाउ ,कटाक्ष , नारीको नाङ्गा नर्तक, यौन प्रदर्शन, अनावश्यक फाइट र समाजको भल्गारिटि लाई मात्रै हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही हेरेर क्षेणिक आनन्द लिन्छन दर्शक। हल बाट बाहिर आउदा बिर्सनु पर्छ किनकि त्यस्ले दर्शकको मुटुमा मस्तिष्कमा स्थाइ प्रभाव पारेकै हुँदैन । तसर्थ हामीले यथार्थपरक चलचित्र बनाउन समेत लाग्नु पर्छ। जसले गर्दा भोलिका पुस्ताहरुले हाम्रो क्रियसनलाइ ईतिहासको रुपमा याद गरुन।
निर्देशक समाजले के कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
निर्देशक समाज एउटा संस्था हो। निर्देशक समाजले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाइ आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा कसरि प्रबर्धन गर्न सकिन्छ र दर्शकहरुलाई कसरि राम्रो चलचित्र मार्फत मनोरंजनको साथमा शिक्षा प्रदान गर्ने र निर्देशकहरुको हकहित तथा उत्थानमा लागेर समग्र चलचित्र उधोगलाइ उकास्ने कार्यमा लागेको छ। कोभिड-१९ र लकडाउनको मारमा परेका निर्देशकहरुलाई राहत वितरण गर्ने कार्य समेत गर्यो र अबका दिनमा चलचित्र उधोग पुनस् सुचारु भएको अबस्थामा सम्पूर्ण निर्देशकहरु एकबद्ध भएर चलचित्र क्षेत्रलाइ उकास्ने सहकार्यमा लागेको छ।
तपाई आफुलाई जनतासामु कसरि चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
म एक चलचित्र निर्देशक हुँ, बिगत लामो समय देखि चलचित्र निर्देशनमा नै लागेकी छु। भाग्यमा भन्दा कर्ममा बिश्वास गर्छु र राम्रो चलचित्र दर्शकहरुले दिने कोशिसमा छु। चलचित्र क्षेत्रलाइ प्रबर्धन गर्ने मेरो उदेश्य छ। चलचित्र निर्देशन संगै आफ्नो ब्यबसाय, सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय रहदै आएकी छु। यधपी म चलचित्रकर्मी भएर चलचित्र क्षेत्रको उत्थानमा लागिपरेको हुँदा चलचित्रकर्मी नै भनेर चिनाउन चाहन्छु।
जीवन अनि जीवनका भोगाइहरु के हुन् ?
तपाइँको बिचारमा सिनेमा भनेको के हो ?
यस्तो अवस्थाबाट चलचित्र क्षेत्रलाई माथि उकास्न के गर्नुपर्छ ?
कोभिड-१९ तथा लकडाउन गर्दा थालिएको चलचित्र उधोगमा कलाकार र कन्टेन्ट राम्रो भए उकास्न समस्या छैन। तर, अब फिल्मको लगानी घटाउनुपर्छ। दुई तिन करोड लगानीका फिल्महरु रु।१ करोड सम्ममा निर्माण गर्नुपर्छ। थोरै लगानीमा उत्कृष्ट काम गर्न सक्यो भने घाटा लाग्दैन। लगानी घटाउन कलाकार, प्राविधिक अथवा निर्देशकलाई कम ज्याला दिएर चाहिं हुँदैन। बरु कलाकारलाई सेयर दिनुपर्छ। निर्देशन पक्षलाइ पनि सवल बनाएर कथालाई न्याय दिएर हामीले दर्शक सामु पुर्याउन सक्यो भने चलचित्र क्षेत्रलाइ उकास्न सकिन्छ।